ကားဝပျရှော့မှာ အလုပျသမားဘဝကနပွေီး စခဲ့ရတဲ့ အောငျမွငျခွငျး နညျးလမျးမြားကို ပွောပွလာတဲ့ အဆိုတျောမနော – Maythadin
ကားဝပျရှော့မှာ အလုပျသမားဘဝကနပွေီး စခဲ့ရတဲ့ အောငျမွငျခွငျး နညျးလမျးမြားကို ပွောပွလာတဲ့ အဆိုတျောမနော
May Thadin | November 13, 2021 | Cele News | No Comments
ခဈြပရိသတျကွီးရေ ယခုပွောပွပေးသှားမယျ့ အကွောငျးအရာလေးကတော့ အောငျမွငျကြျောကွားနတေဲ့ အဆိုတျော မနောရဲ့ လေးစားစရာအကွောငျးလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ မနောကသူ့ဘဝကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ အတှအေ့ကွံတှေ သူ့ရဲ့ page ကနေ မြှဝလောခဲ့ပါတယျ။
ပရိသတျအခိုငျအမာရရှိထားတဲ့အဆို တျော မနော ကတော့အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေိုဆကျလကျလုပျဆောငျနပွေီး သမီးဖွဈသူမကွေေးမုံကလညျး
အနုပညာလောကထဲစတငျဝငျရောကျလာခဲ့ပါပွီ။ ဖအတေူသမီးလေးမို့ အသံလညျးအရမျးကောငျးပွီး အခုဆိုမကွေေးမုံကို အားပေးတဲ့သူတှတေောငျ အမြားအပွားရှိနပေါပွီ။
မနောက အခုခတျေလူငယျတှကေို အခြိနျကို အကြိုးရှိအောငျ အသုံးခတြတျဖို့နဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအတှအေ့ကွုံတှကေို ယခုလိုပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။ မနော က “၁. ကြှနျလို သညျးခံရမယျ။ ၂. သခငျလိုဖွဈအောငျ ရညျရှယျခကျြ ပွငျးထနျရမယျ ၃. မိမိဆရာထကျစောစောထရမယျ ဝယြောဝစ်စပွုလုပျပွီး နောကျကမြှအိပျရတယျ။
၄. နရေ့ကျတှတေိုငျးမှာ အခြိနျကို ခိုးယူတတျရမယျ ” ဆိုပွီး ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။ မနောဟာ ကားဘျောဒီရုံမှာ အလုပျလုပျခဲ့ပွီးသူမြားတှေ
၉နှဈ ကွာမှတတျတဲ့ ပညာကို သူမြားတှထေကျစောစောထကာအလုပျကိုပိုကွိုးစားပွီး လလေ့ာသူဖွဈတဲ့အတှကျ ၆နှဈနဲ့ပညာတှေ တတျ မွောကျခဲ့ပါတယျ။
နောကျတော့တရုတျပွညျ ” ဝပွညျနယျ ”မှာ ဆေးသုတျတဲ့အလုပျလုပျကိုငျတဲ့ သူငယျခငျြးတဈယောကျဟာ မနောဆီကို လာလညျခဲ့တယျ။
လကျဖကျရညျသောကျရအောငျဆိုပွီး ဆိုငျချေါပွီးဘယျလိုဝငျငှရေတယျ ဘယျလောကျအထိရတယျဆိုတာကိုပွောပွခဲ့တော့မနောကအရမျးအားကခြဲ့တယျ။
အဲ့ခတျေကတဈလ ၁၅၀၀ ပဲရသေးတာကိုး သူ့သူငယျခငျြးက ၂သိနျးကြျောရနတေော့ အားကတြာဟာမဆနျးပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ သူ့သူငယျခငျြးက သူနဲ့အလုပျလိုကျလုပျဖို့ချေါတယျ။သူဆုံးဖွတျခကျြ ဝဝေါးနခေဲ့တယျ။ ဒါနဲ့ပဲ မနောဟာ သူ့ရဲ့မမေနေဲ့တိုငျပငျတော့” မမေကေခှငျ့မပွုဘူး
ငါ့သား မငျးကိုယျပိုငျဆိုငျခှဲနိုငျတဲ့အခြိနျမှ မငျးဆရာကိုခှငျ့တောငျးပွီး ဆိုငျခှဲပါတဲ့ဆရာက ဆိုငျခှဲဖို့ခှငျ့မပွုဘူးဆိုလြှငျတော့မငျး’ဝ’ပွညျနယျကိုထှကျလုပျခငျြလုပျပေါ့တဲ့ ခှငျ့တောငျးရမှာ မငျးအပိုငျးခှငျ့ပွုတာမပွုတာက ဆရာ့အပိုငျးတဲ့ ” ဆိုပွီးပွောခဲ့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ ဆရာကိုပွောဖို့လုပျတိုငျး မပွောရဲ အမွဲလှဲနခေဲ့တာကွောငျ့ သူထှကျပွေးခဲ့တယျ။ဆရာက ခဏခဏပွနျချေါတယျ။ သူ့အမကေပွနျပို့ခဲ့တယျ။သို့သျော ခဏ ယခဏပွနျထှကျပွေးနတေော့သူ့ဆရာကလညျး
မငျးထိုကျနဲ့မငျးကံဆိုပွီးထားလိုကျတော့တယျ။ သူ့အမကေလညျး မနောကအသကျငယျသေးတော့စိုးရိမျစိတျနဲ့အသိဖွဈတဲ့အနျတီဆုအကူအညီနဲ့ဆရာဦးဇျောလှငျ ဆနျးသဈရောငျခွညျ အမညျရှိ ကားဘျောဒီရုံကိုရောကျခဲ့တယျ။
ဆရာကလညျးဘယျလောကျထိတတျလဲ စသဖွငျ့အလုပျနဲ့ ပတျသတျတာတှမေေးတယျပေါ့။ တိုကျ မှောကျ အကုနျပွငျနိုငျပွီဆိုတော့ ဆရာကလညျး တဈလ ၄၅၀၀ ပေးတယျ။
ဒီလိုနဲ့ သူက ကွိုးစားရငျးနဲ့လကျထောကျနရောရကာ တဈလကို ၉ ထောငျ ပေးခဲ့တယျ။ ဒီလိုနဲ့ သူကိုယျတိုငျ အလုပျတှကေို စီမံခနျ့ခှဲနိုငျပွီး လကျခံနိုငျလာတယျ။
လကျထောကျဆိုတော့ ပညာကမသေးဘူးလေ။ နောကျတော့ သူကတပညျ့တှလေညျးရကာ ဆရာကောငျးပီပီနညျးနညျးယူမြားမြားပေးရတယျ။ သူတို့ထကျလညျး အစောထသနျ့ရှငျးရေးလုပျဘာညာ စသဖွငျ့ ပွီးတော့မှသူအားကိုးရတဲ့ တပညျ့တှကေိုနိုးပွီး အလုပျဆကျကွတယျပေါ့။ဒီနရောမှာလညျး သူဟာညဘကျတှဆေို ၁၂ထိအလုပျဆငျးပွီး ပိုကွိုးစားက လလေ့ာသငျယူခဲ့ရတယျ။
ပညာတှမွေနျမွနျတတျမွောကျခငျြတဲ့အတှကျပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူက ဆရာဇျောလှငျဆီမှာ ကားအသဈတှကေို လုပျတတျလာခဲ့တယျ။ဟိုငျးလပျ ဆနျနီ ပါဗလကော ဘနျစူပါရုကားနှငျ့ ဂဈြကားတှကေိုဆရာတှရေဲ့ကြေးဇူးနဲ့လုပျတတျလာခဲ့တယျ။
ဒါနဲ့ပထမသငျပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဦးသိနျးဇျောဆီက တိုကျခံရတဲ့ကားတှကေို ဖွောငျ့တတျခဲ့တယျ။ကားအမိုးကိုငျးကပျခွံ ပညာလညျးထပျမံရခဲ့တယျ။ နောကျတော့ ကိုယျတိုငျ ကားမောငျးတတျခဲ့တယျ။
ဒါ့အပွငျဆရာ့ဆီမှာပညာသငျဆဲမှာပဲသူ့ရဲ့မငျးသမီးနဲ့ အိမျ ထောငျကခြဲ့တယျပေါ့ဗြာ။ဒီလိုနဲ့နောကျပိုငျးမှာမိဘဆရာကြေး ဇူးမြားနဲ့သူဟာဆရာဖွဈခဲ့တယျပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ သူဟာ ဘာ့ကွောငျ့ ဒီလိုတှလေုပျနိုငျတဲ့ထိ အောငျမွငျခဲ့လညျးဆိုတာကိုအခကျြ ၇ ခကျြနဲ့ ပွောပွလာခဲ့တယျ။
၁။အခြိနျကိုတနျဖိုးထားခွငျး(အခြိနျလုခဲ့ခွငျး) ၂။စာတှတေျောတျောလေးဖတျတယျ ၃။မိဘ ဆရာသမားမြားရဲ့အဆုံးအမ သွဝါဒကိုခံယူတယျ။ ၄။မိမိရညျရှယျခကျြကိုအပကျြမခံဘူး ၅။မိမိအလုပျအပျသူမြားကို လေးစားတနျဖိုးထားတယျ ကတိတညျတယျ အရှုံးပျေါလညျးမိမိလကျခံထားသညျ့ အတိုငျးအပွီးထိဆကျလုပျပေးတယျ
(ဒါဟာ တာဝနျယူမှု စိတျဓာတျအပွညျ့အဝရှိပွီး ဆရာကောငျးပီသတာပါ) ၆။ရိုးသားပှငျ့လငျးတယျ ပွုပွငျစရာမြားကိုအတိအကအြရှိအတိုငျးပွောတယျ (ဒါကလညျး သူမြားတှလေို ရပါတယျကှာဆိုပွီး လုပျခဲ့တာမဟုတျဘူး)၇။ရကျခြိနျးတဈလလုပျရမညျ့ကားကိုရကျ၂၀ ဝနျးကငျြနှငျ့အပွီးနညေ့ကွိုးစားလုပျပေးတယျ။ ည (၂) နာရီဝနျးကငျြထိ အခြိနျပို ဆငျးပေးခဲ့တယျ။
မပွညျ့စုံသူတှအေတှကျတော့ အားလပျ ခြိနျနဲ့ အနားယူခြိနျကိုတတျနိုငျသမြှလြှော့ရမယျပေါ့ဗြာ ” ဆိုပွီး အဆိုတျော မနောဟာသူကွုံတှခေဲ့ရတာတှကေို ခဈြပရိသတျကွီးထံ ပွနျလညျမြှဝပေေးတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဆိုတျောမနောက အတှေ့ အကွုံအရမျးမြားတဲ့ သူတဈယောကျပါပဲ။ အခြိနျကိုဘယျလိုအသုံးခပြွီး ကွိုး စားခဲ့တယျဆိုတာကအစ ပွောပွပေးခဲ့တာပါ။
ဒါဟာ ကနြျောအတတျနိုငျဆုံးအတိုခြုံးပွောပွပေးခဲ့တာပါ။ တကယျ့အရှညျကတော့ မနောရဲ့ page မှာသှားရောကျဖတျရှု့နိုငျပါတယျခဗြာ။ သူဟာကနြျောတို့ကို ဘယျလိုစိတျမြိုးထားရမယျ ဘယျလိုကွိုးစားရမယျကအစသငျပေးလိုကျ သလိုပါပဲ။ တကယျကို လေးစားအတုယူဖှယျပါနျော။
ခဈြပရိသတျကွီလညျးဒီစာလေးကို ဖတျရှု့ပွီး ကွိုကျနှဈသကျပါက share ပွီး မှတျခကျြလေးတှလေညျး ရေးသားပေးခဲ့ကွပါဦးနျော။ အခြိနျပေးပွီးဖတျရှု့ပေးကွသော ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာသောနလေ့ေးဖွဈပါစကြေေးဇူးလညျးအထူးတငျရှိပါတယျနျော။
ကားဝပ်ရှော့မှာ အလုပ်သမားဘဝကနေပြီး စခဲ့ရတဲ့ အောင်မြင်ခြင်း နည်းလမ်းများကို ပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော်မနော
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ယခုပြောပြပေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ အဆိုတော် မနောရဲ့ လေးစားစရာအကြောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနောကသူ့ဘဝကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြံတွေ သူ့ရဲ့ page ကနေ မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အဆို တော် မနော ကတော့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး သမီးဖြစ်သူမေကြေးမုံကလည်း အနုပညာလောကထဲစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။
ဖအေတူသမီးလေးမို့ အသံလည်းအရမ်းကောင်းပြီး အခုဆိုမေကြေးမုံကို အားပေးတဲ့သူတွေတောင် အများအပြားရှိနေပါပြီ။
မနောက အခုခေတ်လူငယ်တွေကို အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချတတ်ဖို့နဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို ယခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ မနော က “၁. ကျွန်လို သည်းခံရမယ်။ ၂. သခင်လိုဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက် ပြင်းထန်ရမယ် ၃. မိမိဆရာထက်စောစောထရမယ် ဝေယျာဝစ္စပြုလုပ်ပြီး နောက်ကျမှအိပ်ရတယ်။
၄. နေ့ရက်တွေတိုင်းမှာ အချိန်ကို ခိုးယူတတ်ရမယ် ” ဆိုပြီး ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။မနောဟာ ကားဘော်ဒီရုံမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးသူများတွေ ၉နှစ် ကြာမှတတ်တဲ့ ပညာကို သူများတွေထက်စောစောထကာအလုပ်ကိုပိုကြိုးစားပြီး လေ့လာသူဖြစ်တဲ့အတွက် ၆နှစ်နဲ့ပညာတွေ တတ် မြောက်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တော့တရုတ်ပြည် ” ဝပြည်နယ် ”မှာ ဆေးသုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဟာ မနောဆီကို လာလည်ခဲ့တယ်။ လက်ဖက်ရည်သောက်ရအောင်ဆိုပြီး ဆိုင်ခေါ်ပြီးဘယ်လိုဝင်ငွေရတယ် ဘယ်လောက်အထိရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တော့မနောကအရမ်းအားကျခဲ့တယ်။
အဲ့ခေတ်ကတစ်လ ၁၅၀၀ ပဲရသေးတာကိုး သူ့သူငယ်ချင်းက ၂သိန်းကျော်ရနေတော့ အားကျတာဟာမဆန်းပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းက သူနဲ့အလုပ်လိုက်လုပ်ဖို့ခေါ်တယ်။သူဆုံးဖြတ်ချက် ဝေဝါးနေခဲ့တယ်။
ဒါနဲ့ပဲ မနောဟာ သူ့ရဲ့မေမေနဲ့တိုင်ပင်တော့” မေမေကခွင့်မပြုဘူး ငါ့သား မင်းကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခွဲနိုင်တဲ့အချိန်မှ မင်းဆရာကိုခွင့်တောင်းပြီး ဆိုင်ခွဲပါတဲ့ဆရာက ဆိုင်ခွဲဖို့ခွင့်မပြုဘူးဆိုလျှင်တော့မင်း’ဝ’ပြည်နယ်ကိုထွက်လုပ်ချင်လုပ်ပေါ့တဲ့ ခွင့်တောင်းရမှာ မင်းအပိုင်းခွင့်ပြုတာမပြုတာက ဆရာ့အပိုင်းတဲ့ ” ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဆရာကိုပြောဖို့လုပ်တိုင်း မပြောရဲ အမြဲလွဲနေခဲ့တာကြောင့် သူထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ဆရာက ခဏခဏပြန်ခေါ်တယ်။ သူ့အမေကပြန်ပို့ခဲ့တယ်။
သို့သော် ခဏ ယခဏပြန်ထွက်ပြေးနေတော့သူ့ဆရာကလည်း မင်းထိုက်နဲ့မင်းကံဆိုပြီးထားလိုက်တော့တယ်။ သူ့အမေကလည်း မနောကအသက်ငယ်သေးတော့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့အသိဖြစ်တဲ့အန်တီဆုအကူအညီနဲ့ဆရာဦးဇော်လွင် ဆန်းသစ်ရောင်ခြည် အမည်ရှိ ကားဘော်ဒီရုံကိုရောက်ခဲ့တယ်။
ဆရာကလည်းဘယ်လောက်ထိတတ်လဲ စသဖြင့်အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေမေးတယ်ပေါ့။ တိုက် မှောက် အကုန်ပြင်နိုင်ပြီဆိုတော့ ဆရာကလည်း တစ်လ ၄၅၀၀ ပေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူက ကြိုးစားရင်းနဲ့လက်ထောက်နေရာရကာ တစ်လကို ၉ ထောင် ပေးခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူကိုယ်တိုင် အလုပ်တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး လက်ခံနိုင်လာတယ်။
လက်ထောက်ဆိုတော့ ပညာကမသေးဘူးလေ။ နောက်တော့ သူကတပည့်တွေလည်းရကာ ဆရာကောင်းပီပီနည်းနည်းယူများများပေးရတယ်။
သူတို့ထက်လည်း အစောထသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဘာညာ စသဖြင့် ပြီးတော့မှသူအားကိုးရတဲ့ တပည့်တွေကိုနိုးပြီး အလုပ်ဆက်ကြတယ်ပေါ့။ဒီနေရာမှာလည်း သူဟာညဘက်တွေဆို ၁၂ထိအလုပ်ဆင်းပြီး ပိုကြိုးစားက လေ့လာသင်ယူခဲ့ရတယ်။
ပညာတွေမြန်မြန်တတ်မြောက်ချင်တဲ့အတွက်ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူက ဆရာဇော်လွင်ဆီမှာ ကားအသစ်တွေကို လုပ်တတ်လာခဲ့တယ်။ဟိုင်းလပ် ဆန်နီ ပါဗလေကာ ဘန်စူပါရုကားနှင့် ဂျစ်ကားတွေကိုဆရာတွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့လုပ်တတ်လာခဲ့တယ်။
ဒါနဲ့ပထမသင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဦးသိန်းဇော်ဆီက တိုက်ခံရတဲ့ကားတွေကို ဖြောင့်တတ်ခဲ့တယ်။ကားအမိုးကိုင်းကပ်ခြံ ပညာလည်းထပ်မံရခဲ့တယ်။ နောက်တော့ ကိုယ်တိုင် ကားမောင်းတတ်ခဲ့တယ်။
ဒါ့အပြင်ဆရာ့ဆီမှာပညာသင်ဆဲမှာပဲသူ့ရဲ့မင်းသမီးနဲ့ အိမ် ထောင်ကျခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီလိုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိဘဆရာကျေး ဇူးများနဲ့သူဟာဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ သူဟာ ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုတွေလုပ်နိုင်တဲ့ထိ အောင်မြင်ခဲ့လည်းဆိုတာကိုအချက် ၇ ချက်နဲ့ ပြောပြလာခဲ့တယ်။
၁။အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်း(အချိန်လုခဲ့ခြင်း) ၂။စာတွေတော်တော်လေးဖတ်တယ် ၃။မိဘ ဆရာသမားများရဲ့အဆုံးအမ သြဝါဒကိုခံယူတယ်။ ၄။မိမိရည်ရွယ်ချက်ကိုအပျက်မခံဘူး ၅။မိမိအလုပ်အပ်သူများကို လေးစားတန်ဖိုးထားတယ် ကတိတည်တယ် အရှုံးပေါ်လည်းမိမိလက်ခံထားသည့် အတိုင်းအပြီးထိဆက်လုပ်ပေးတယ်
(ဒါဟာ တာဝန်ယူမှု စိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝရှိပြီး ဆရာကောင်းပီသတာပါ) ၆။ရိုးသားပွင့်လင်းတယ် ပြုပြင်စရာများကိုအတိအကျအရှိအတိုင်းပြောတယ် (ဒါကလည်း သူများတွေလို ရပါတယ်ကွာဆိုပြီး လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး)၇။ရက်ချိန်းတစ်လလုပ်ရမည့်ကားကိုရက်၂၀ ဝန်းကျင်နှင့်အပြီးနေ့ညကြိုးစားလုပ်ပေးတယ်။ ည (၂) နာရီဝန်းကျင်ထိ အချိန်ပို ဆင်းပေးခဲ့တယ်။
မပြည့်စုံသူတွေအတွက်တော့ အားလပ် ချိန်နဲ့ အနားယူချိန်ကိုတတ်နိုင်သမျှလျှော့ရမယ်ပေါ့ဗျာ ” ဆိုပြီး အဆိုတော် မနောဟာသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကို ချစ်ပရိသတ်ကြီးထံ ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်မနောက အတွေ့ အကြုံအရမ်းများတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ အချိန်ကိုဘယ်လိုအသုံးချပြီး ကြိုး စားခဲ့တယ်ဆိုတာကအစ ပြောပြပေးခဲ့တာပါ။
ဒါဟာ ကျနော်အတတ်နိုင်ဆုံးအတိုချုံးပြောပြပေးခဲ့တာပါ။ တကယ့်အရှည်ကတော့ မနောရဲ့ page မှာသွားရောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်ခဗျာ။ သူဟာကျနော်တို့ကို ဘယ်လိုစိတ်မျိုးထားရမယ် ဘယ်လိုကြိုးစားရမယ်ကအစသင်ပေးလိုက် သလိုပါပဲ။ တကယ်ကို လေးစားအတုယူဖွယ်ပါနော်။
ချစ်ပရိသတ်ကြီလည်းဒီစာလေးကို ဖတ်ရှု့ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ပါက share ပြီး မှတ်ချက်လေးတွေလည်း ရေးသားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ အချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြသော ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
အသီးအနှံလေးတှေ စိုကျပြိုးနပွေီး ဘ၀ကို ရိုးရိုးရှငျးရှငျး ဖွတျသနျးနတေဲ့ မငျးသား ကောငျးခနျ့ …
ဖူးပှငျ့သခငျအိမျမှ ပစ်စညျးခိုးယူခဲ့တဲ့ အိမျဖျော(၂)ယောကျကို PDFတှလေို့ စှပျစှဲပွောဆိုခဲ့တဲ့ ရှရေူပါဦး
လပေါငျးမြားစှာ မိသားစုနဲ့ဝေးကှာပွီး အကဉျြးထောငျထဲရောကျနတေဲ့ မောငျဖွဈသူပိုငျတံခှနျကို သတိရကွောငျးရငျဖှငျ့လာတဲ့ မခေဈြသှေး